Iifoto zamaphephadonga ze-Android. | I-Androidsis
Uthotho kunye neefilimu
Khuphela okona kulungileyo iimifanekiso zemovie ye-Android yakho. Yenza ngokwezifiso iselfowuni okanye ithebhulethi yakho ngenkqubo yokusebenza kaGoogle ngenye yeefowuni zangaphambili zeefilimu ezijongwa kakhulu kunye noluhlu kule minyaka idlulileyo.
Ukuba ufuna ukuba nabalinganiswa abaphambili kuthotho lwakho oluthandayo okanye iimuvi kwifowuni yakho ye-Android, emva koko olu khetho lweemvelaphi ngokuqinisekileyo luya kukukholisa. Sifumana imali yezona bhanyabhanya zidumileyo kunye noluhlu lomzuzu. Ungasoloko uziphatha ngefowuni.
Kwigalari engezantsi uya kuba nakho ukufumana ezona wallpapers zintle kolu luhlu lweemiboniso bhanyabhanya, ezifumaneka kwisisombululo esifanelekileyo. Khetha eyona ilungele ifowuni yakho!
Ngaba ubufuna okungakumbi iphepha lodonga okanye iselfowuni? Kwikhonkco esikubeke kulo uya kubafumana.